﻿ कतारमा कार्यरत नेपालीसँगको विशेष कुराकानी
कतारमा कार्यरत नेपालीसँगको विशेष कुराकानी
अप्रत्यासित रुपमा ७ देशले कतारसँगको कुटनैतिक सम्बन्ध तोडेपछि विश्वभरको ध्यान यतिबेला कतारमा केन्द्रित भएको छ । सोमबार युएई, साउदीअरब, यमन, इजिप्ट, बहराइनले कतारसँगको कुटनैतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरे भने त्यसपछि लिबिया र माल्दिभ्सले पनि सम्बन्ध तोडेका छन् । यसरी अघोषित नाकाबन्दीमा परेपछि कतारका विषयमा विश्वभर चर्चा सुरु भएको छ । सानो देश कतारमा लाखौं नेपाली काम गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपाल र नेपाली पनि यस विषयमा चिन्तित छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्था र अब उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको विषयमा केन्द्रित भएर न्यूजलयले कतारस्थित अन्तर्राट्रिय ट्रान्सपोर्ट कम्पनी इन्टरसिपिङ वलका लेखा प्रमुख अर्जुन चापागाईसँग कुराकानी गरेको छ ।
अर्जुन जी ७ देशले कतारसँगको सम्बन्ध तोडेपछि कतारमा रहेका नेपालीको विषयमा धेरै चिन्ता गरिएको छ । यस घटनाबाट त्यहाँ रहेका नेपालीहरुमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
नेपालमा चर्चा गरिए जस्तो हामीलाई समस्या छैन, हामी सुरक्षित छौं, हाम्रो दैनिकी नियमित तालिका अनुशार चलिरहेको छ ।
पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा त्यहाँका नेपाली कामदार जानकार भएकै होलान् । उनीहरुको मनस्थिति कस्तो छ ?
प्राय सबै जानकार छन् । तर असर मैले देख्दा र बुझ्दासम्म कतै देखिएको छैन । सवै नियमित चलिरहेको छ । नियमित ड्युटीमा गएका छन् ।
यस घटनाले नेपाल र नेपालीलाई कतिसम्म असर पर्ला त ?
अहिले तत्काल कुनै असर नपरेपनि यो निरन्तर रह्यो भने असर पर्छ नै । एउटा मूल्यबृद्धि हुन्छ जसले भारीमात्रामा कामदार कटौती हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्छ ।
अहिले नै कामदार कटौती हुने सम्भावना छ ?
तत्काल नहोला किन भने यहाँको प्रमुख आम्दानी भनेको प्राकृतिक उत्पादन हो जसले विश्वभर बजार लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दवावमा पनि यो समाधान हुन्छ । तत्काल कामदार कटौती नहुन सक्छ ।
पछिल्लो घटनाक्रमपछि त नेपालले कतारका लागि श्रमस्विकृती नै रोक्यो यसले कस्तो असर पर्ला ?
पक्कै पनि यो निर्णयले कतारसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ । यो हतारमा गरियो भन्ने मलाई लाग्छ । यदि असहज भएको भए यहीं कतारबाट नै निर्णय गरिन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ । यसले भोलि नेपाल र कतारबीचको सम्बन्धमा तिक्तता नआउला भन्न सकिंदैन ।
छिमेकी देशले सम्बन्ध तोडेपछि खाद्यान्न लगायतको संकट परेको, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा सामान रित्तिएको खबर आएका छन् नि ?
कतारसँग ठयाक्कै सामुन्द्रिक सीमा जोडिएको युएइ, साउदी र बहराइनले सम्बन्ध तोडेपछि अप्ठ्यारो त पक्कै परेको छ तर कतार साउदीसँग त्यति निर्भर छैन । बाँकी रह्यो सामानको अभावको कुरा त्यस्तो खाली भएको स्थिती होइन, यहाँ खाद्यसामाग्री धेरै जसो भारत र पाकिस्तानबाट आउने हँदा खाद्यान्न संकटको कुरा सत्य होइन । ती देशबाट आयात भएको सामान ओमानको सामुन्द्रिक बाटो हुँदै कतार भित्रिन्छ । त्यस्तै मासु लगायतका सामाग्री ब्राजिल, न्यूजिल्यान्ड तथा अष्टेलिया लगायत राष्ट्रबाट भित्रिने गर्दछ । त्यसैले आत्तिनु पर्ने अबस्था भने छैन ।
सबै सामुन्द्रिक मार्ग जोडिएका देशले त सम्बन्ध तोडे कहाँबाट भित्रिन्छ सामान ?
होइन, बिल्कुलै त्यस्तो होइन, अलिकति रुट फरक पर्छ तर ओमनमार्फतको जलमार्गबाट सजिलै भित्र्याउन सकिन्छ । अहिले ओमान पूर्ण त कतारको पक्षमा छ ।
पछिल्लो घटनाक्रमका कारण कुनै पनि बेला कतारमा साउदीले आक्रमण गर्नसक्ने खबरहरु आएका छन् नी ?
यो त मिडियाहरुमा छाएको खबरमात्र हो, जुनरुपमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको साउदी भ्रमण भयो । त्यसकै बलमा साउदी नेतृत्वमा अहिले कतारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिएको हो । तर हामीले यो विर्सनुहुन्न कि मिडिलइस्टमा कतारमा नै सबैभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक तैनाथ भएका छन् । जसलाई कतारले कयौं डलर तिरेर राखेको छ । त्यसैले आक्रमण हुन सक्दैन । अनि अहिले कुबेत र इरान दुवै कतारको पक्षमा छन् जुन देशसँग साउदीको सातो जान्छ ।
अनि अहिले आएर किन छिमेकी देशहरुले कतारलाई एक्ल्याएका हुन् ? तपाइँलाई के लाग्छ ?
होइन साउदी र कतारको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै चिसो हो । अहिले जुन आतंकबादीलाई सहयोग गरेको भन्ने विषय निकालिएको छ यो त देखाउने दाँत हो, खासमा सानो देश कतारको द्रुत विकास र समृद्धिबाट जलन भएको रोश हो यो । यसमा अमेरिकाको ठूलो चाल छ भने साउदीको उक्साहटमा अन्य राष्ट्र उचालिएका छन् ।
यस घटनाले त्यहाँको जहाज र कतार एयरलायन्सलाई त ठूलो घाटा पुग्ने अनुमान गरिन्छ नी ?
केही घाटा त पर्छ नै हेर्नुुुस । केही एयरलाइन्सले उडान बन्द गरेका छन् । तर बाटो अन्यत्र पनि छ, कतार एयरलाइन्सका अन्य १५० गन्तब्य छन् । केही राष्ट्रको बाधा हुँदैमा ठूलो कम्पनीलाई खासै असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
पछिल्लो घटनापछि अरव लिगले केही बोलेको छ ?
अरब लिगका सबै देश कतारको विपक्षमा नाकाबन्दीमा उत्रिएका कारणले त्यहाँबाट कुनै धारणा नआउला तर दवावपछि सहमति र वार्ताको पहल बढ्न सक्छ होला ।
वार्ता र सहमति नै यसको निकास हो जसका लागि कुबेतले प्रयास अघि बढाएको छ । बढीमा २ हप्तामा यसले निकास पाउँछ । कतारलाई युरोपियन युनियन र बेलायतको पनि समर्थन रहन्छ किन भने कतारमा तिनीहरुकै मुख्य लगानी रहेको छ ।
यसले २०२२ मा हुने विश्वकपलाई कति असर गर्ला ?
तत्काल केही हुन्न, विकास निर्माण चलिरहन्छ तर यही जारी रह्यो भने विश्वकप अनिश्चित छ । किन कि कतारले मात्रै सबै आगन्तुक थाम्न नै सक्दैन । यो कदममा विश्वकप कतारमा हुनुहुँदैनभन्नेहरुको पनि स्वार्थ लुकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
अन्त्यमा नेपाल र नेपाली कामदारका परिवारजनका लागि केहि सन्देश ?
कतारमा चर्चा भए जस्तो भयावह अवस्था छैन । तर सँधै यस्तै होला भनेर चाहिं यसै भन्न सकिंदैन । हामी सुरक्षित छौ र हाम्रो रोजगारी समेत सुरक्षित छ । अनि अर्को कुरा कतार सानो देश हो तर समृद्ध छ । कतारसँगको सम्बन्ध राम्रो रह्यो भने हामीले धेरै लिन सक्छौं । जस्तो पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीसँगै लगानीका विषयमा कुराकानी भएका छन् । यसले फाइदा पुर्याउँछ तर हतारमा निर्णय गरेर सम्बन्ध बिग्रीयो भने दीर्घकालीन असर गर्छ । (प्रस्तुति हरिहर नेपाल)